Fito alahadin’ny fiangonana SHINE Hifarana amin’ny alahady ho avy izao
Hofaranana amin’ny alahady 4 novambra ho avy izao ilay fotoam-bavaka fito alahady, karakarain’ny fiangonana Shine manerana ny Nosy.
Ho an’ny fiangonana Eglise Evangelique Shine Ampasampito dia hiavaka tsy toy ny mahazatra io fotoana io, hoy ny pastora Andriantsifaritana Tsiorisoa tamin’ny mpanao gazety omaly. Fotoana hitondran’izy ireo am-bavaka ireo olona manana olana ara-pahasalamana mantsy io koa hanasany ny rehetra. Arahina antsa an-kira fiderana goavana izany iarahan’ny fiangonana amin’ireo mpino rehetra tonga eny an-toerana. Nomarihin’ity mpitandrina io moa fa aretina maro no efa sitrana nandritra izay fito alahady izay ary mbola ho maro ihany koa no hositranina amin’io. Hisy fidirana in-droa amin’io. Manomboka amin’ny 7 ora maraina ny fotoana voalohany raha amin’ny 10 ora maraina ny fotoana faharoa. Vavaka fanasitranana no hatao amin’ireo fotoana roa ireo raha amin’ny hariva kosa no hanatontosana ny antsan-kira fiderana.